Roobab xoogan oo ka da’ay Caabudwaaq xanibeyna isusocdka dadka iyo gaadiidka (Sawiro) – Radio Daljir
Abriil 10, 2013 1:27 g 0
Caabudwaaq, April 10, Roobab mahiigaan ah oo todobaadyadii u danbeeyey ka da’ayey magaalada Caabudwaaq iyo nawaaxigeedda ayaa xalay & shalay siweyn uga hooray gudaha magaalada Caasbudwaaq ee Waqooyiga gobolka Galgaduud.
Waxaana gabi ahaan xirmay goobaha Waxbarashadda, Shirkaddaha Ganacsiga iyo suuq weynaha Jubba ee dadku ay ka deegtaan oo kuyaala badhtamaha magaaladda Caabudwaaq.
Inkastoo roobabku aysan khasaare badan geysan hadana waxaa xirmay isu socodka dadka iyo gaadiidka kadib markii wadooyinka ay biyo aad u badan dhuux dhaafiyeen.
Sidoo kale roobabkan ayaa ah kuwa ka da?ay tuulooyinka hoostaga magaalada Caabudwaaq taasi oo ay dadka iyo duunyaduba ay ku diirsadeen roobabka guga .
Bilowgii bishan ayey ahayd markii ay bilowdeen roobabka guga kuwaas oo si xoog leh uga da?ay Gobolada dhexe ee dalka soomaaliya islamarkaana magaalada Caabudwaaq ay ku dileen ilaa iyo sadex qof oo laba ka mid ah ay ahaayeen caruur halka mida kalana uu ahaa nin cuuryaan ah oo meydkiisa la helay maalin kadib markii ay roobabku da?een isagoo meel bali ah dhexyaal.